U-Lu Weibing uthetha malunga nomhla wokumiliselwa kweRedmi nge-SD855 | I-Androidsis
Ukusukela ngalo mzuzu Umphathi Jikelele weRedmi uLu Weibing eqinisekisile, ngoFebruwari, ukuba kuyakubakho ifowuni yefowuni yeRedmi efikelelekayo exhaswa yiSpapdragon 855, Abalandeli bebhrendi bebelindele umhla wokukhutshwa kwayo.
Ngoku, ukuqhubela incoko ngesi sihloko, iposti entsha ye-Weibo evela kwisigqeba icebise ukuba ukufika kwesiphelo esiphezulu kungangabikho mva kakhulu.
Kwisikrini esingezantsi, u-Weibing uchaze nge-Weibo ukuba abalandeli akufuneki bakholelwe kwaye basasaze amarhe. Isicatshulwa esiguqulelweyo 'asikhawulezi kangako, asicothi kangako' kwisithuba sakho seWeibo sidityaniswa yimithombo yeendaba yaseTshayina ukuya kumhla wokumiliselwa kwefowuni yeRedmi yeflegi kunye SD855. Ngamanye amagama, ngoku kucingelwa ukuba ukwenziwa ngokusemthethweni kwayo kusondele.
Xa isigqeba iRedmi sithi "hayi ngokukhawuleza", oko kunokuthetha ukuba iselfowuni ayizukuqalisa ngo-Epreli. Isicatshulwa 'esingacothi kangako' sinokuthetha ukuba umhla wokumiliselwa kwefowuni ephambili kaRedmi awunakugqitha ngoJuni. Ke ngoko, Kukho ithuba lokuba i-smartphone izakuba semthethweni ngoMeyi okanye ngoJuni.
E-China, nge-18 kaJuni ngumnyhadala wokuthenga izinto kwi-Intanethi. Inkampani inokuthi ijolise ekusungulweni kwefowuni yeRedmi 855 yeflegi ejikeleze umnyhadala wokuqhuba ukuthengisa okuphezulu.
Abenzi beefowuni ezahlukeneyo abanjengoSamsung, LG, Google nabanye kulindeleke ukuba babhengeze iifowuni ezahlukeneyo ukusuka ngo-Agasti kude kube sekupheleni konyaka. Ke kubonakala ngathi phakathi enyakeni kunokuba lixesha elifanelekileyo lokusungulwa kwefowuni yeRedmi. Ezinye iingxelo ziye zabanga oko inokuqala e-China njenge I-Redmi Pro 2Ngelixa amanye amarhe esithi le fowuni inye inokuvela ngaphandle kwe-China njengePoco F2.
U-Weibing ebesandula ukukuqinisekisa oko I-Redmi ene-Snapdragon 855 iya kuxhotyiswa nge-3.5mm audio jack. Izolo, umphathi weemveliso zeXiaomi, uWang Teng Thomas, ukhuphe umfanekiso obonisa umququzeleli kunye nomongameli weLin Xiaomi, kunye nefowuni engaqondakaliyo enekhamera ye-selfie kunye ne-3.5mm yejack audio, eya kuba njalo. . Nangona kunjalo, kukho amathuba okuba yenye ye-smartphone, njengoko u-Weibing watshoyo ifowuni yeflegi yenkampani ayizukuveza i-pop-up snapper.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umhla wokuphehlelelwa kweRedmi ngeSpapdragon 855 yacetyiswa nguLu Weibing
IXiaomi Mi AirDots Pro isungulwe ngokusesikweni eSpain